Jaw Crusher Zvikamu
Zvikamu zveCone Crusher
Impact Crusher Zvikamu
VSI Crusher Zvikamu
Zvimwe Zvipfeko Zvekupfeka
Metal Crusher Zvikamu
SHANVIM yakavambwa muna 1991 isu tiri vanotungamira pasi rose mutengesi wezvipfeko zvinopfeka uye zvigadziriso mumaindasitiri ekugadzirisa zvicherwa, aggregate, kuvaka uye kudzokorora maindasitiri.
Nechikwata chevadiki, vane simba uye vane simba, isu tinoshanda pamwe nekuzvipira kubatsira vatengi kuderedza mutengo, kuwedzera zvikamu kuwanikwa, kuderedza nguva yekudzika uye kupa yakatokura ...
SHANVIMyakazvipira kupa inovimbika asi inokwanisika kupfeka mhinduro dzemigodhi & aggregate maindasitiri. Zvese zvigadzirwa zvedu zvakagadzirirwa vatengi, kuitira kuti vanyatso kuchinjika kune ...
Vanhu Vane zvipo
MUPASI WENYIKA YENYIKA YEKUPEKA ZVIKAMU
Isu Tine Anopfuura 30+ Makore Anoshanda Chiitiko muAgency
Shanvim Industry （Jinhua） Co., Ltd. yakazvipira kuendesa zvigadziriso zvinodhura zvakanyanya zvinosanganisa dhizaini, kugadzira, kushanda, mushure mekutengesa sevhisi uye kuchengetedza kwekupwanya nekuongorora michina, kugadzira humwe hutsika kune vatengi.
Zvichienderana nezvatinosangana nazvo muindasitiri kwemakore mazhinji, hunyanzvi hwakadzama uye timu yehunyanzvi, takaisa inonzwika, yakamisikidzwa manejimendi system, uye takagadzira yenguva refu, yakagadzikana yekudyidzana nemakambani mazhinji ekunze. Naizvozvo, isu tiri pachinzvimbo chakanaka chekupa huwandu hwakazara hwezvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye masevhisi kune vatengi vedu vekumba nevekunze muzvikamu zvekuvaka zvivakwa, mainjiniya, migodhi, jecha nematombo akaunganidzwa, uye tsvina yakasimba, pakati pezvimwe.
Nekukura kuri kuramba kuchienderera mberi kwebhizinesi, tinopa dhizaini yepamusoro-soro yeprojekti yese yemigodhi, uye tinopa mhinduro kune yese mutsara wekugadzira kwehupenyu hurefu hwekupfeka zvikamu, zvichiita kuti zvidyarwa zvako zvideredze mutengo, kuwedzera chibereko, uye kunatsiridza kushanda zvakanaka.
Zvichakadaro, takatangisa sevhisi yekumira kumakambani ekunze, kusimudzira kushandira pamwe nevashambadzi veChinese, uye nekugadzira zvirongwa zvekutenga zvegore negore kuti ive nechokwadi chemhando yechigadzirwa uye kugadzikana. Nyanzvi dzehunyanzvi dzakatemerwawo kuita kugadzirwa uye kuongororwa kwechigadzirwa, uye kuronga nekugadzirisa tekinoroji, mhando uye zvine chekuita nenyaya dzekufambisa dzekufambisa kwakachengeteka uye kuri nyore.
Isu takasimbisa huvepo zvese kumba nekune dzimwe nyika. Pamusoro pemapurovhinzi anopfuura makumi maviri, matunhu anozvitonga nemanisiparati muChina, zvigadzirwa zvedu zvinotumirwawo kunyika dzinopfuura makumi matatu, dzakadai seAustralia, Canada, Russia, South Africa, Indonesia, Zambia, DR Congo, Kazakhstan, Chile, nePeru, kungotaura zvishoma.
Scientific innovation uye kufambira mberi ndiyo DNA yedu. Isu tinotsvaga kuwedzera bhizinesi redu nenzira yakachengetedzeka uye inoshamwaridzana nenharaunda, uye kubatsira vashandi vedu kuvandudza kukwikwidza kwavo nekuvapa dzidziso uye mikana yekuvandudza hunyanzvi, uye kutiita kuti tive kambani yepasi rose zvechokwadi. Chinangwa chedu ndechekugonesa kambani yako kuwana budiriro yakawanda nekuita purofiti iri nani uye kukwikwidza.
Isu tinoyedza kugadzira imwe yeanonyanya kukosha mabhureki muchikamu, uye tive yaunofarira system mhinduro mupi.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve zvigadzirwa nemasevhisi edu, ndapota inzwa wakasununguka kutibata uye shanyira yedu saiti.
Tinotarisira kushanda pamwe nekuchengetedza hukama hwenguva refu newe.
UNO SHANVIM YAKO
Room 812, kuvaka 6, No.3, Jinqu Road, Wucheng District, Jinhua City, Zhejiang Province, China
Kune chero nyaya dzekuteerera ndapota taura nesu nekutumira email kune sales@shanvim.com